Nkuzi nke umuaka - Galveston County Food Bank
ỌR & & ỌR LE
Ndị ọrụ GCFB
Ọrụ na GCFB
Ozi DARA IWU
OKWU D IM MKPA
Nkwupụta na-abụghị ikpa oke
Nkuzi nke umuaka
Homebound Nri Nri
Mmụta na-edozi ahụ
Chọta Enyemaka Nri
HOST nri / ego draịva
Nri na Ego Ego
Formụaka maka Kidz
Ohere afọ ofufo
Ihe omume GCFB
Untlọ Nkwakọba Halọ Haunt
Gaa na Agụụ
Ekekọrịta ezumike gị
Nye ego taa
OTHERzọ ndị ọzọ iji nye onyinye
N'ịgbalị imechi ọdịiche nke oge agụụ oge ọkọchị, Galveston County Food Bank ehiwela mmemme Kidz Pacz. N'oge ọkọchị, ọtụtụ ụmụaka na-eri nri n'efu ma ọ bụ belata nri n'ụlọ akwụkwọ na-esikarị ike nweta nri zuru ezu n'ụlọ. Site na mmemme Kidz Pacz anyị na-enye njikere iri nri, nri nri ụmụaka ga-erubere ụmụaka tozuru oke maka izu 10 n'oge ọnwa ọkọchị.
Gịnị bụ ntozu chọrọ?
Ezinaụlọ ga-enwerịrị usoro iwu ntinye aka na TEFAP ma biri na Galveston County. Childrenmụaka ga-adị n’agbata afọ atọ na iri na asatọ.
Kedu ka m ga - esi debanye aha maka mmemme Kidz Pacz?
Lelee nke anyị mmekọrịta map n'okpuru chọta Enyemaka na weebụsaịtị anyị iji chọta ebe Kidz Pacz dị nso na gị. Biko kpọọ ebe nrụọrụ ahụ iji kwado oge ọrụ ha na usoro ndebanye aha.
Maka ozi ndị ọzọ kpọtụrụ Kelly Boyer na 409.945.4232 ma ọ bụ kelly@galvestoncountyfoodbank.org
Kedu ihe na-abanye na nri Kidz Pacz?
Mpempe akwụkwọ ọ bụla nwere ihe nri ụtụtụ 2, ihe nri ehihie abụọ, na nri abụọ. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ; 2 iko ọka ọ ,ụ ,ụ, 2 mmanya nri ụtụtụ, 1 nke raviolis, nnukwu ite ahụekere 1, igbe ihe ọ juiceụ juiceụ 1, akpa 1 nke ndị na-agba cheese, na iko 2 applesauce.
Ugboro ole ka nwatakịrị tozuru etozu na-enweta nri nri?
Childrenmụaka tozuru etozu na-anata mkpọ otu ugboro n'izu maka oge mmemme a na-ebido na mbido June ruo etiti August.
Kedu otu ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ nzukọ si bụrụ ebe nnabata maka mmemme Kidz Pacz?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịghọ ebe nnabata iji kesaa ngwungwu Kidz Pacz nye ụmụaka n'oge ọkọchị, biko zitere ha email Kelly Boyer kwuru.
2021 Ọnọdụ saịtị
Ndị sonyere nwere ike ịdenye aha naanị n'otu saịtị maka oge mmemme a.
Ndebanye aha zuru ezu na saịtị.
A na-enye nri na-edozi ahụ, nri enyi na enyi maka izu ụka maka ụmụaka nọ n'ihe ize ndụ na ụlọ akwụkwọ k-12 na usoro mmemme nri n'oge okpomọkụ. Ọtụtụ n'ime ụmụaka a na-adabere na nri ụlọ akwụkwọ iji nye nri ụtụtụ na nri ehihie n'oge afọ akwụkwọ. N'oge ezumike, dị ka ngwụsị izu na ezumike, ọtụtụ n'ime ụmụaka a na-aga obere nri ma ọ bụ na-enweghị. Mmemme Backpack Buddy nke Galveston County Food Bank na-arụ ọrụ iji mejupụta ọdịiche ahụ site n'inye nri na-edozi ahụ, nke nwere omume enyi ụmụaka maka ụlọ akwụkwọ iji laa.
Nwatakịrị ga-aga ụlọ akwụkwọ akwadoro maka Mmemme Backpack Buddy na nwatakịrị ahụ kwesịrị iru eru maka nri ụtụtụ na nri ehihie a na-akwụghị ụgwọ. Ọ bụrụ na ịmaghị ma ụlọ akwụkwọ nwa gị ọ kwadoro maka mmemme a, ị nwere ike ịgakwuru onye ndụmọdụ ụlọ akwụkwọ.
Kedu otu m ga-esi debanye aha nwa m maka mmemme Backpack Buddy?
Ọ bụrụ na akwadoro ụlọ akwụkwọ nwa gị maka Mmemme Backpack Buddy, ị nwere ike ịdebanye aha nwa gị site na ịbịakwute Onye Nchịkọta Azu Backpack Buddy (nke na-abụkarị onye ndụmọdụ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ onye nnọchiteanya nke unitieslọ Akwụkwọ)
Kedu ihe na-abịa na akpaazụ akpa Buddy?
Ngwunye ọ bụla dị n’agbata kilogram 7-10 ma nwee ihe oriri ndị a: 2 protein, mkpụrụ osisi abụọ, akwụkwọ nri 2, nri nri abụọ dị mma, ọka 2, na mmiri ara ehi kwụsiri ike.
Ugboro ole ka nwatakịrị tozuru etozu na-anata akpa Backpack Buddy?
A na-ekesa ngwugwu na Friday ọ bụla.
Kedu otu ụlọ akwụkwọ si edebanye aha maka mmemme Backpack Buddy?
Onye nnọchi anya ụlọ akwụkwọ nwere ike itinye akwụkwọ iji sonye na Mmemme Backpack Buddy site na ịga Ebe a. Wee họrọ "Tinye iji sonye na 2020/2021 Backpack Buddy Programme".
Maka ajụjụ ma ọ bụ enyemaka, biko kpaliri Kelly Boyer kwuru.
9am - 3pm (Tuesday-Tọzdee); 9am - 12pm (Fraịde)
Ọrụ azụmahịa Bldg:
Oge Ọfịs: 8am - 4pm (Mọnde-Fraịde)
Pịa ebe a maka E-mail Nhọrọ
Edebere Galveston County Food Bank dị ka nzukọ na-enweghị uru 501 (c) (3). A na-atụnye ụtụ maka ụtụ dị ka iwu kwadoro. Gallọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nri Galveston County kwenyere na ị na-azụ ahịa na ịkwụwa aka ọtọ na ikwesị ntụkwasị obi. Ọrụ Lighthouse na-enye ohere ka Galveston County Food Bank kwado ụkpụrụ ndị a site na ịrụ ọrụ dị ka ngwa ọrụ maka ndị otu obodo, gụnyere ndị ọrụ Banyere Food, iji nyefee akụkọ nzuzo, aro, ma ọ bụ mkpesa na ndị ọzọ na-enyere ndị gọọmentị Galveston County Food Bank aka idozi nsogbu mgbe ha na-ejigide ndị ọkachamara. ụkpụrụ. Institutionlọ ọrụ a bụ onye na-eweta ohere ha nhata.
Biko pịa ebe a ka ị gụọ Iwu Donor.
Copyright © 2021 Vestlọ akụ nri Galveston County - Ikike niile echekwabara. Kwadoro site na Nweta Social!